Kutsvaga kwechokwadi mhinduro | Linux Vakapindwa muropa
Zvakajairika kuisa nyowani Kugovera X uye tsvaga zvinyorwa zvacho, asi pane zviripo nguva dzose uye mune zvese zviitiko zvinyorwa zvekuparadzirwa kweLinux? Vashandisi vanoziva kusiyanisa matambudziko ekuparadzira, kana software chaiyo? Vashandisi vatsva vanoziva nzira yekuwana mhinduro?
Zvinonyanya kuitika ndezvekuti KANA PAVE PANO iyo mhinduro yeiyo Kugovera X (kungave mumutauro wedu kana muChirungu), asi vazhinji vashandisi vatsva havana tsika yekufungisisa mhinduro iyoyo Z zvako Kugovera X chinja. Kuti uwane mhinduro yeiyo Y kugovera, mukana wekuti wakaenzana kana wakabatanidzwa neayo Distro X. Asi ko kana ndikakuudza kuti mhinduro yeiyo Dunhu Y inogona kushandira nenzira imwechete yako Distro X?
Kusiya algebra padivi nekuenzanisira mamiriro ezvinhu aya zvishoma, Ubuntu ine huwandu hwesingaverengeke hweruzivo, dzidziso uye howto's, mablog uye maforamu, angave echiSpanish, Chirungu, uye nemimwe mitauro yakakura. Zvakajairika kune vashandisi veUbuntu vanoenda kuDistros nyowani kutonga zvisirizvo kutora kwavo kutsva kwekusawana ruzivo nezvayo kana maitiro ekugadzirisa dambudziko, kana mhinduro yacho iri pasi pemhino dzako, asi ivo havazive kuti vazvione sei.
Kudzokera kumienzaniso (iyo kwandiri ndiyo nzira inoshanda yekunzwisisa kufunga), pandakatora danho rekubva kuUbuntu kuenda kuOpenSUSE, ndakanga ndajaira (kazhinji) kutsvaga uye kubvisa kusava nechokwadi kwese kwandaive nako nezveCanonical Sisitimu kuburikidza nemaforamu uye / kana mablog. Asi mushandisi weLinux, nekufamba kwenguva (zvirinani ndizvo zvakaitika kwandiri), anowana nzira yekugadzirisa matambudziko anogona kuoneka nenzira yakajeka, inonzwisisika uye yekuzvidzidzisa, kutsvaga "zvakafanana" kuchinetso chako mukugovera kwakasiyana zvachose. Mazuva maviri apfuura, ini ndakatora danho rekubuda muOpenSUSE, uye ndakafambisa fungidziro yangu kuFedora 2 (iyo isiri yekunyepedzera, kana isiri dumwa: D), uye unditende kuti chinhu chega chandaifanira kuongorora kwaive kushanda kwe Yum.
Angave mutsva munyika yeLinux (kwete Ubuntu, LINUX!) Aizoita, aizoenda kuGoogle otsvaga mhinduro zvichienderana nedambudziko ravo nenzira inotevera:
"Firewall isiri kushanda muUbuntu 8.10"
Iyi tambo yekutsvaga ndeyechokwadi here? Zvino, kana tikatarisa neimwe nzira:
"Firewall isiri kushanda muFedora 10"
Tichawana zvakafanana mhedzisiro? Zvichava zviripo mumutauro wedu here? Tichafanirwa kuziva kuti iyo Firewall iripi uye kumisikidzwa kwayo muDanho nyowani? Takamirira here "gwara" kana "nhanho nhanho" maitiro ekuzviita?
Pamwe hongu uye pamwe kwete. Chaizvoizvo tinofanira kufunga kuti mablog uye maforamu anoitwa nevashandisi veDistribution iri mubvunzo (ini ndaisa Ubuntu naFedora semuenzaniso), uye neizvi zvinofanirwa kujekeswa kuti kana Ubuntu iine ruzivo rwakawandisa paInternet, iri nekuda kwehuwandu hwakawanda hwevashandisi hwayakwezva, uye kune hukuru hukuru, avo vashandisi vanoshandiswa zvakanyanya kuve nemhinduro "patray".
Chaizvoizvo, iyo "nyowani" mushandisi weLinux (kwete Ubuntu, LINUX!) Inofanira kunzwisisa ndeiyi:
Kana izvo zvakagoverwa zvakavakirwa paLinux, mirairo yayo yese inoshanda kune ese kugovera.
Kugoverwa kwega kwega kune maneja wayo wepakeji, kungave Kukwanisa, Zypper, Yum, nezvimwe. Kuziva zvakadzama mashandisiro ayo nekushandisa, zviri nyore kunzwisisa kuti iyo Distribution inoshanda sei, chii chainogamuchira uye nezvisingagamuchire.
Izvo zvinokwanisika software mapakeji hazvina kufanana, angave iwo .deb kana .rpm, asi ese anobva kubhinari, akaunganidzwa uye akaiswa mumapakeji system anoshandiswa neDistribution.
Mafolda, madhiraivha, uye mafaera muLinux akaiswa munzira imwe chete. Kuti kune zvimwe zvimwe zvinosarudzika pakati pekuparadzira, imhaka yekuti ndezvavo. Asi / kumba Gentoo yakafanana neSlackware!
Nezvose izvi uye nezvimwe zvakawanda mapoinzi andisati ndataura, zvakanaka kugona kufunga kuti kana kugoverwa kwedu kune Gnome desktop, zvingangoita kuti iko kukanganisa pamwe nemhinduro yacho kunoshanda kune chero kumwe kugovera kunoshandisa Gnome. Kana tine dambudziko neK3B, zvakanaka kuti tinzwisise izvozvo iyo yekutsvaga mhinduro haina kubva pane kugovera ("K3B muUbuntu haitambe mp3"), asi asi musoftware yacho ("K3B haitambe mp3").
Zvinonyanya kukosha kusiyanisa matambudziko esoftware, Distribution, Linux, Hardware, nezvimwe. Asi chete nenguva, kudzidza, kusiyaniswa kwezvinhu, panguva iyoyo chete ndipo paunowana tsika kana kudzidza nezve izvo zvekutarisa, uye wekutonga.
Muchokwadi, iko kugovera inongova sango remapakeji, ayo ane ayo maitiro ekuisa kana maneja uye kugoverwa kwevabereki. Pairi, mamwe ese ekushandisa uye akasiyana software anoshanda, uye pazasi, iyo Linux kernel, iyo yakafanana mune ese Kugovaniswa.
Zvichida, mune dzimwe nguva, vashandisi vatsva havana kutungamirirwa nenzira yekuwana mhinduro yedambudziko. Ivo chete vashandisi vanotenda izvozvo windows anotaridzika zvakashata muKubuntu, uye havambozviratidzi izvozvo el mutadzi anogona kunge ari KDE. Ivo vese vashandisi vanowanzo kutonga Distribution yekushaikwa mhinduro "patray", apo iwe unogona kunyorera imwe mhinduro kubva kune kumwe kugovera X uye kugadzirisa dambudziko rakafanana.
Uye nditende, zvinogoneka ...
Ichi chinyorwa chakanyorwa na bachi.tux anonyora zvakare Un Tux Loose
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kutsvaga kwechokwadi kwemhinduro
Kumbundira kukuru Bachi, ndinokutendai nekutinyorera nhasi.
Uye ndinotora mukana uno kukwazisa nharaunda yese. Kubva mangwana vanosara neimwe windowsero shoma, kwemazuva gumi. Ndichakuona pandinodzoka.
Pakurairwa kwechikepe shamwari yangu Vapoteri, chero chavanomuroverera ... ndichave ndichigeza zuva muBrazil ...: D
Ini ndinowana fungidziro yekuti izvi hazviuye chete kune avo vanoda rubatsiro, asi kubva mukati meLinux tsika, vanhuwo zvavo, kunyangwe pavanotumira dzidziso, mazhinji anotarisana nedistros, zvichireva kuti vanongoshandira izvo chete, kunyangwe izvo usave wakadaro.
Semuenzaniso, mhinduro zhinji muUbuntu dzinoonekwa pamablog ane chimiro ichi:
"Ungagadzirisa sei X chirongwa cheUbuntu Hardy Heron"
Uye ipapo iwe wakapinda iyi link uye ukaona kuti mhinduro yaishandira chero munhu.
Asi ini ndinofunga vanozviita sezvizvi kushamba maoko. Hazvina hutano kutaura kuti dzidziso yakadaro inogona kushandiswa kune chero distro nekuti kana kukanganisa kukaitika munyori wekudzidzisa angave asina kunangana zvine mutsindo uye aigona kurasikirwa nekuvimbika. Sezvineiwo, iwe waizodoma kuti ndeipi distro iyo inoratidzirwa kushanda pairi uye ndeapi mamwe ayo aigona kushanda pairi.
Saka iwe zvauri kureva ndezvekuti hakuna mamwe akaomarara madhizaini kupfuura mamwe?
@ esty: ndatenda nekundirega ndinyore kuLXA!
Ndezvekuti ini ndaive nechikwereti kwauri (ivo) tikiti kubva saiti yatanga.
Ini handisi kuzowedzera zvakawanda maererano nemusoro wenyaya uyu, kungoti ini ndinogara nezvandakanyora, uye ndosimbisa chirevo che @ffuentes.
Kwazisai vese ...
PS: @esty yakati izwi "Nharaunda". SL chirwere pamwe?
bachi.tux, unogamuchirwa shamwari, iwe unongoziva kuti ndanga ndichiedza kukukurudzira kwenguva yakareba sei kuti ndikuunzire kuti unyore pano, pasina budiriro.
Cesar, ini handisi kuzununguka, zvichibva pane yakanakisa N @ tu post, ini ndiri SL mushandisi, ini ndinoshandisa thunderbird, firefox, pidgin, nezvimwe. Ini ndinoti nharaunda, nekuti zvinoita senge kwandiri kuti takagadzira yakanaka yekukurukura boka pakati pedu tese, handiti? LXA! Ino inzvimbo yakanaka !!.
hehe, anga achidzedzereka kwenguva yakareba, hehe. Ari kupokana nerima rerima.
Yakanaka posvo pane bachi.tux, kudada kwaunonyora muLXA! Ichokwadi, ndinobvuma kuti ndinopokana pandisingakwanise kuwana mhinduro kumatambudziko andinayo mune yangu distro X ... kunyangwe zvikagadziriswa muY.
Zvinoenderana na cesar na esty… isu tiri nharaunda yakanaka !!
Nehurombo ... ndinobvumirana newe. LXA! inzvimbo yakanaka kwazvo !!!
… Uye Nharaunda iri kutaurwa inokura sei, handiti?
Ramba wakadaro ...
@ bachi.tux: Kana iwe uchida kuenderera uchinyora pano unongofanira kutizivisa, kutaura chokwadi tichava nenzvimbo kunyanya vhiki ino kana Esteban asipo.
Tinofanira kutanga kuzvidaidza kuti "LXA Nharaunda!"